10 filim oo bilaash ah oo Xbox One ah 2022 | Wax kasta oo bilaash ah hel - Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn 10 Filim oo Bilaash ah Xbox One 2022 | Ka Hel Dhammaan Lacag La'aan
Miyaad ka daashay ku ciyaarista Xbox One -kaaga? Oo miyaad la yaabban tahay sida Xbox One -kaaga u caawin karo jacaylkaaga daawashada filimada bilaashka ah? Haddii fikradahaagu ku xeeran yihiin mid ka mid ah su'aalahayaga, markaa waxaa jira war wanaagsan.
Xbox One -kaaga ayaa taas ku habboon maxaa yeelay waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku daawato filimo lacag la'aan ah dalabyo iyo degello badan.
Daawashada iyo ciyaaridu waa shay kale oo madadaaladaada iyo raaxaysigaaga gaarsiin kara heer kale adiga oo siinaya iskaashi muuqaal iyo maskaxeed isku mar.
Si kastaba ha noqotee, waxaad ka heli doontaa xulashooyin kala duwan oo aad ku daawan karto filimada bilaashka ah Xbox One maqaalkan. Markaa fadhiiso oo akhri si aad u aragto liiska filimada bilaashka ah ee Xbox One sanadka 2022.
Ku saabsan Xbox One
Xbox One waa khadad ka mid ah consoles'ka ciyaarta fiidiyaha guriga oo ay soo saartay Microsoft. Waxaa la shaaciyey bishii Maajo 2013, waa kan beddelaya Xbox 360 iyo kan saddexaad ee aasaaska u ah taxanaha Xbox ee consoles -ka ciyaarta fiidiyaha.
Microsoft waxay u suuq geysay aaladda sidii “nidaamka madadaalada oo dhan-ku-jirka ah”, sidaa darteed magaca 'Xbox One'.
Nidaamka Xbox One wuxuu ka kooban yahay Xbox One console, Kinect sensor (ikhtiyaar), korontada, xadhigga korontada, Xbox One kontoroolaha bilaa wireless, Laba baytariyada AA, Hal fiilo HDMI ah, iyo dukumiintiyo (hagaha bilowga degdegga ah, buug -gacmeedka, kaarka tijaabada ee Xbox Live).
kan akhri, 16 Barnaamijyada TGI ee ugu Fiican Jimcaha aan dhamaadka lahayn | $ 10 Cunto -yaqaanka
Sida Loo Daawado Filimada Xorta Ah Ee Xbox One 2022 | Wax Walba Bilaash Ku Hesho
Halkan waxaa ah liiska 10-ka filim ee ugu sarreeya ee bilaashka ah ee Xbox One.
Tani waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagu daawado filimada bilaashka ah ee qalabkaaga. Waxaad ku bilaabi kartaa adigoo gujinaya 'Ciyaarheyga iyo Apps-ka, ka dibna dooro ikhtiyaarka 'Apps' ee dhinaca bidixda ah. Ka dib markaad gujiso 'Microsoft Edge', ku qor 'flixtor. to/' in bar raadinta iyo hoogay.
Kadibna waxaad gashid boqortooyada sixirka oo ay kujiraan boqolaal filim oo lacag la’aan ah internetka. Doorashada badhanka 'u sii soco bogga' waxay kuu oggolaan doontaa inaad ku dhex rogto aflaamtii ugu dambeeyay ee degelkan adoo go'aan ka gaaraya inaad doorato midka ugu fiican oo aad u fudud.
XIDHIIDHKA: 15 -ka Xiddig ee TV -ga ugu Mushaarka Badan Sanadka 2022 | La cusbooneysiiyay
Malaha, popcorn flix waa mid ka mid ah siyaabaha ugu caansan ee aad ku daawan karto filimada bilaashka ah Xbox -kaaga. Si aad awood ugu yeelatid filimada barnaamijkan, tag bogga hore ee aaladdaada, oo u gudub 'dukaanka' safka sare ee muuqda ee shaashaddaada.
Marka bogga bakhaarku furmo, markaa waxaad dooran kartaa ikhtiyaarka 'Barnaamijyada' ee bartamaha bogga, oo sii wad inaad ku qorto Popcorn flix qaybta 'App Search'. Rakibo, qaado sanduuq salool oo ku raaxayso filimadaada bilaashka ah.
#3. Filimada Vudu iyo TV -ga
Midka cusub ee Microsoft Xbox wuxuu leeyahay shuraako Vudu Filim iyo TV ah, taasoo la micno ah inay kuu jiraan kumanaan filim oo lacag la’aan ah dhammaadka toddobaadkaaga.
Vudu wuxuu ku siinayaa fursad aad ku daawato filimada leh faragelin xayeysiis oo xadidan, oo gebi ahaanba bilaash ah. Sidoo kale, waxay soo geliyaan bandhigyada TV-ga (dhererkooda oo dhan) waqti ku habboon codsiga Vudu, taasoo ka dhigaysa waayo-aragnimadaada ku-qulqulka filimada bilaashka ah ee Xbox gabi ahaanba dhibaato la'aan.
Waqtiyada badankood, arjigan waxaa laga soo degsadaa Xbox -kaaga si aad uga booddo dhibka ku jira habka dukaanka caajiska ah. YouTube -ku wuxuu ku siinayaa marin u hel filimo badan, dhacdooyin bandhigyo TV ah, iyo dokumentiyo bilaash ah.
Xayeysiisyada ayaa laga yaabaa inay yihiin dhib, laakiin sidee taasi u tahay walaac marka aad gebi ahaanba ku mashquusho muuqaalada aad jeceshahay filimka aad jeceshahay?
Waad furi kartaa codsigan adiga oo gujinaya 'Ciyaarahayga iyo Barnaamijyadayda shaashadda ugu weyn ee Xbox -kaaga, ka dib waxaad dooran kartaa' Barnaamijyada '.
Bogga xiga, waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto dhammaan codsiyada lagu soo dejiyay aaladdaada, oo midkood noqon doono YouTube.
Crackle, oo hore loogu yiqiinay Sony Crackle, waa codsi kale oo bilaash ah kaas oo aad ku daawan karto filimada adigoon dhib ku qabin inaad iska diiwaangeliso ama sameysato akoon.
In kasta oo ay leedahay xayeysiisyo dhowr ah oo ciyaaraya kahor iyo inta lagu jiro qulqulka waxyaabaha, waxay ka madax bannaan tahay hakad haddii kale.
XIDHIIDHKA: 20-ka Muuqaal ee Tv-ga ugu Fiican ee Dadka Waaweyn 2022
Markaa, si aad ugu soo dejiso filimada bilaashka ah Xbox -kaaga adiga oo maraya Sony Crackle, tag dukaanka oo dooro ikhtiyaarka 'Barnaamijyada'. Guji baarka raadinta, ku qor magaca arjiga, oo isla markiiba soo degso. Sidan ayaad ku heli kartaa filimo fara badan oo noocyo kala duwan leh.
#6. Iftiin buluug ah
Miyaad si fudud u rabtaa inaad ku raaxaysato dambiga dambiga ah inaad dib u daawato filimka aad ugu jeceshahay ee aad iibsatay 10 sano ka hor markii ciyaartoy disk ahi jireen? Mise ma doonaysid inaad iibsato DVD si aad lacag la'aan uga dhigto? Xbox -kaaga ayaa taas kuu samayn kara.
Lahaanshaha codsiga Blue Ray wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku daawato filimada bilaashka ah Xbox One. Waxay soo bandhigaysaa CD -yadaaga marka aad geliso Xbox One -kaaga.
Vimeo waa mid ka mid ah barnaamijyada hormuudka u ah qulqulka da'da maanta, sidoo kale waxay ku siineysaa marin u hel filimo badan oo bilaash ah.
Si aad uga faa'iidaysato wax kasta oo ay bixiso, waa inaad raacdaa xeerar isku mid ah si aad u soo degsato arjigaaga Xbox hal-guji 'dukaanka' bogga hore, dooro 'Barnaamijyada', oo raadi Vimeo.
Ku rakibidu waa inay kugu filan tahay inaad hesho xubinnimadooda aasaasiga ah ee bilaashka ah, oo aad ku daawan karto filimada aad jeceshahay! Moreso, kani waa mid ka mid ah meelaha aad ka arki karto filimada bilaashka ah Xbox One.
Sidoo kale, akhri tan: 23 Barnaamijyada Streaming ugu Fiican Xbox mid ka mid ah 2022 -ka
#8. Sanduuqa TV -ga
Tani waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee aad ka daawan karto filimada bilaashka ah Xbox One. Aflaanta bilaashka ah iyo Sanduuqa TV -ga ayaa isla socda. Sanduuqa TV -gu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku daawato filimada aan la tirin karin Xbox One -kaaga.
Si aad u bilowdo daawashada filimada barnaamijkan, tag bogga hore ee Xbox -kaaga, oo guji 'dukaanka'. Fur qaybta 'Barnaamijyada' waxaad awoodi doontaa inaad aragto isla marka dukaanku furmo.
Barka raadinta, ka raadi sanduuqa TV -ga oo soo degso arjiga. Iyada oo la hubinayo tayada HD -ga wanaagsan, dalabkani wuxuu fulinayaa riyadaada habeenka Sabtida ee kaamilka ah, raaxada leh.
XIDHIIDHKA: Sidee Loo Bixiyaa Inta Lagu Jiro FMLA? Suurtagal ma tahay?
Appkan waa mid ka mid ah abka ugu fiican ee lagu daawado filimada bilaashka ah ee Xbox One. Waxay ku dhowdahay inay la mid tahay mareegaha desktop-ka, laakiin si wanaagsan ayaa loogu hagaajiyay mobilka oo ay aad u fududahay in la isticmaalo.
Dusha sare ee barnaamijku wuxuu leeyahay isla filimaan muuqaal ah oo ku dul wareegaya dusha sare ee mareegaha, oo leh noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah.
Dhammaan noocyada iyo aaladda raadinta ayaa laga heli karaa barnaamijka maadaama ay ku jiraan mareegaha, iyo dabool kasta oo filim waa weyn yahay si loo arko adigoon taaban.
Doorashada filimku waxay kuu geyn doontaa bogga sharraxaadda halkaas oo ay ku muujineyso taariikhda la siidaayay, muddada, qiimeynta, iyo nooca.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad u soo dejisan kartaa Tubi for iPhone, iPod touch, iPad, Apple TV, Amazon Fire TV, Android, Roku, Chromecast, Xbox 360, Xbox One, Samsung TV, iyo Samsung Blu-ray player.
Aflaan badan oo bilaash ah iyo bandhigyo ayaa laga dayn karaa abka FilmRise ee Xbox One. Waxay maalin kasta ku daraan waxyaabo cusub oo ah noocyada sida argagaxa, dembiyada, ficilka, riwaayadaha, iyo dukumentiyada.
Qaybaha kale ee faa'iidada leh waxaa ka mid ah Filimada Dareen-wanaagsan, Aflaan La Mahadiyay, iyo Ku Salaysan Dhacdooyinka Dhabta ah.
In kasta oo aadan u baahnayn koonto isticmaale si aad filimada uga shubto barnaamijkan, haddana waxaad ku dari kartaa cinwaanno liiskaaga daawashada si aad ula socoto waxa aad rabto inaad mar dambe sii daadiso.
Waxaad ka daawan kartaa filimada FilmRise iyo bandhigyada aaladaha mobilada ee Android iyo iOS, iyo sidoo kale Amazon Fire TV, Xbox One, iyo Roku.
Liiskan filimada bilaashka ah ayaa fartaada gelin doona boqolaal filim oo bilaash ah. Ku rakib Xbox One kaaga oo waxaad diyaar u noqon doontaa inaad daawato filimka aad dooratay.
10ka App ee ugu Wanaagsan Sida Klarna In 2022|Iibso Hadda Bixi Hadhow
16-ka Jimce ee ugu Fiican TGI Apps|$10 Cunto-cunista
23 Barnaamijyada Streaming ugu Fiican Xbox mid ka mid ah 2022 -ka
15 Barnaamijyo Wajiyaal Qosol leh 2022
Carwada Ganacsiga Nigeria GO - Kor u qaadida Alaabta Nigeria
Khamaarka Filibiin gabi ahaanba waa sharci maadaama dowladda Filibiin aysan wax xannibaad ah ku lahayn. Kasiinkan…
Waxaa jira sababo badan oo lagu jeclaado ku noolaanshaha iyo ka shaqeynta Florida, laga bilaabo canshuur la'aanta gobolka…
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Connecticut: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo